Itvnemovies | May 2022
I-Intanethi iziva izinto ezininzi malunga ne-Elektra 'kwi-Defenders'
*Ilizwi likaKris Jenner* Wenza okumangalisayo, sithandwa. (Isilumkiso: Baninzi ababhuqi ngaphakathi.)
Indlela Yamaqhula Obudlelwane Basetyhini Avuthuzayo Imdaka NjengaMafazana aBantshatshelayo
Ngalo lonke ixesha abafazi benza imuvi, okanye inkwenkwezi kwimuvi - okanye uthixo akavumi, abafazi benza kunye nefilimu - kubonakala ngathi kufuneka babonakalise ngakumbi kunezinye iifilimu, 'uPaul Feig uxelele Iindaba zeBuzzFeed.
USofia Coppola uthi ukukhohliswa kumalunga neNtshukumo yesini kwi-Confederacy, hayi ezobuhlanga.
Ndivakalelwa kukuba awungekhe ubonise imbono yomntu wonke ebalini, ”utshilo umenzi wefilimu.
Nasi isizathu sokuba lo mfazi engakhange aqhwabe ngexesha leNtetho kaMeryl Streep yeGolden Globes
Njengoko abantu ababemngqongile babeqhwaba izandla yaye bevuyisana naye, elinye ibhinqa elalikwiGolden Globes labonakala lingashukumi—kodwa ‘inyaniso yeyokuba ndandisehla iinyembezi.’
Nangona ama-comedies amaninzi ahlekisayo ngaphambi kokuba athembele kwiziqhulo zoloyiko lwe-gay, iBlockers isinika ibali elichukumisayo malunga nomfana oselula kunye nomnqweno kayise wokumnceda ukuba azamkele. (Isilumkiso: abaphangi!)
UShailene Woodley uthe khange abukele iTV ngelixa e-Emmys kwaye ihambe ngendlela onokuyilindela ngayo.
“Bonke abahlobo bam ababukela umabonakude, ndisoloko ndibabuza xa benexesha,” utshilo uWodley. 'Abantu banalo nini ixesha? Ndingumfundi, ngoko ndisoloko ndifunda incwadi.'
Umdlali we 'Harry Potter' uRobert Hardy usweleke eneminyaka engama-91
Wayesaziwa kakhulu njengoMphathiswa weMilingo uCornelius Fudge.
U-Lupita Nyong'o Wachwechwela kwi-Comic-Con kwi-Power Rangers Costume
Kuya kumangalisa ukuba akukho mntu u-Ocean's 8 uqhuba kakuhle kwi-Ofisi yebhokisi
Lixesha lokuba uyeke ukuphatha yonke imuvi egxile kwabasetyhini njengovavanyo lwe-litmus ukubonisa ukubaluleka kwabasetyhini eHollywood.
Ngoku unokuba ngumnikazi weNoveli yokuqala kaJane Villanueva evela ku-'Jane Intombi enyulu '
Funda isicatshulwa esikhethekileyo apha.
U-Rosie Perez Uhamba mva nje kwi-'Jonga'
Umvelisi olawulayo uthe uPerez wayehamba ukuze alandele ixesha elipheleleyo lothando lwakhe lokudlala. Ezi ndaba zilandela iingxelo zokuba u-ABC wayefuna ukumgxotha ngokuzolileyo ngoJanuwari.
UTaylor Swift ubonakala ebuyisela inyoka, kodwa ngaba iya kusebenza?
Indlela engaphambili inenkungu, kodwa iphinde ibenenyoka.
UJohn Boyega uyasiqonda isigxeko sika 'Detroit' kodwa usakholelwa ukuba yeyomntu wonke
'Kufuneka sihambe ebomini sibazi ubumnyama bethu,' uxelele Iindaba zeBuzzFeed. 'Kufuneka siyiqonde intlungu yabantu bethu. Loo nto ayizi neswekile neekeyiki.'
UMichelle Williams kunye noPhilipps oxakekileyo baKhumbula malunga nokuba baphuma nabani na 'kwiDawson's Creek'
Ndithetha ukuthi, ngubani ongathandi ukuhlala nabahlobo aze akhumbule bonke abantu abakhe bathandana nabo?
Ireyibhile kaTaylor Swift ithi akukho nxibelelwano phakathi kosuku lwakhe lokukhululwa kunye nokusweleka kukaMama ka-Kanye West.
Abantu bakhawuleza ukubonisa ukukhululwa kwe-Reputation falls kwisikhumbuzo sokufa komama ka-Kanye West, u-Donda West, kodwa u-publicist kwi-label yerekhodi ye-Swift utshele i-BuzzFeed News 'akukho kulungelelaniswa.'
Ifoto yeProfayile kaRosie O'Donnell eNtsha iTrolling Trump ngokugqibeleleyo
'Oku kuyandoyikisa kancinane.'
Nantsi into awayithethayo uKanye malunga noJay Z ngokuboleka i-20 yezigidi zeedola
'Ndiyaqonda ukuba bebejongene nezinye izinto. Kodwa ukuba lusapho, awuzukuphoswa ngumtshato, ”utshilo uKanye.
Ekudaleni iScandal kunye no-Olivia Pope, uShonda Rhimes watshintsha i-TV Landscape
Ukuze u-Olivia Pope asebenze kwaye aphumelele ... kwafuneka ukuba abe ntathu-ntathu kwaye ephazamisekile kwaye engalunganga okanye enhle okanye ehlakaniphile okanye enomdla njengoko uWalter Whites wehlabathi waba njalo, watsho umdali uShonda Rhimes. .
Ngaphakathi kwiSahluko esitsha 'sokuba nguMary Jane'
Embindini wayo, ukuba nguMary Jane ngumboniso ongowasetyhini omnyama ozamayo nokusilela kwaye ezama kwakhona ukuba nayo yonke into - njengabafazi ababalekayo nabadlala inkanyezi kumboniso. Iindaba zeBuzzFeed zandwendwela iseti ukuba zithethe nomsasazi omtsha u-Erica Shelton Kodish kunye nenkwenkwezi kunye nomvelisi olawulayo uGabrielle Union malunga nempendulo yeXesha le-4 kunye nalapho umboniso uya khona.
Nantsi iMiboniso yeNethiwekhi eNtsha eneNkokheli eziMnyama kwisizini elandelayo
Isikhokelo #ForTheCulture esinobuhlobo kuye nabani na ojonge ukuba neengcambu kuye wonke umntu omnyama kwesi sikwindla. (Iinkqubo zenethiwekhi yeTV kuphela: CBS, NBC, ABC, FOX, kunye neCW.)
igolide ebomvu krismesi imithi
hillary clinton ikhaya laseyork
izibane ezinkulu zegumbi lokuhlala